Nkọwapụta --lọ ọrụ - Noelson Chemicals Technology Co., Ltd.
Jide nkwa ma rụọ ọrụ na aha
bụ ihe kpatara ịkọ aha na ụkpụrụ ebighi ebi!
Noelson Chemicals bụ onye na-emepụta na sopị nke kemịkal dị iche iche. Kemgbe 1996, Noelson Chemicals tinyere ego ma guzobe ụlọ ọrụ na-emepụta ihe na China, dị ka Noelson Micro-powder Industry Inc., Noelson Chemicals (Nanjing) Co., Ltd. Noelson Chemicals (Shanghai) Co., Ltd. Noelson Chemicals Technology Co., Ltd. dị ka ọkọlọtọ nke na-eduga teknụzụ maka nyocha na mmepe, mmepụta na ọkọnọ nke ngwaahịa dị iche iche nwere ọkwa ụwa dị elu na ụlọ, yana dịka ụlọ ọrụ ụfọdụ ngwaahịa aha ama ama ama ama. Ebumnuche ọrụ nkwụsị anyị nke pụrụ iche antirust pigment na conductive & antistatic agents na ngwaahịa, emeriwo ọnọdụ nke ndị isi ụlọ ọrụ.
Elson Noelson Chemicals na-emeso mmụọ ọrụ ọnụ dị ka ndụ nke ụlọ ọrụ, anyị na-akpọ ma na-arụkọ ọrụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ nyocha ọkachamara n'ime na n'èzí obodo ahụ, na-achịkọta ndị mmadụ nwere ikike, na-elekwasị anya n'akụkụ ọhụụ kachasị ọhụrụ nke Micro-powder na pigmenti na-arụ ọrụ. , Nọgide na-enyocha, na-emepe emepe ma mepụta ngwaahịa ọhụrụ ọtụtụ ọrụ.
Application Noelson Chemcials ngwa ngwa ngwa na-ekpuchi mkpuchi, ink, plastik, roba, ihe owuwu ụlọ na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ maka ọtụtụ ụlọ ọrụ na mba dị iche iche na-enye:
Noelson Chemcials dị iche iche usoro ngwaahịa, ntụzịaka na-agwụ ike, na-echebara echiche, ndị ọkachamara, ndị ahịa na ire ahịa na-arụ ọrụ dị mkpa na ụwa, akụkụ nke ngwaahịa mbupụ bụ isi na China na Asia-Pacific mpaghara, bụ ọkachamara kachasị ọkachamara. nke Micro-ntụ ntụ na ọrụ pigmenti na inland China n'oge.
Kachasị mma na Kachasị Mma Ọrụ bụ echiche nke Noelson Chemicals. A na-arụpụta ngwaahịa niile nke Noelson Chemicals ma nye ya ụkpụrụ kacha mma, ụfọdụ ngwaahịa echere dị ka ụkpụrụ mba dị mkpa si dị (dị ka ụkpụrụ American Engineer Technical Association, American FDA standard, International RoHS standard wdg) na mmepụta na ọkọnọ, enwetara asambodo ISO9001 / 2008 na European Union REACH. Kemgbe ọtụtụ afọ, Noelson Chemicals na-akwado SGS, PONY ụlọ ọrụ ikike nke atọ nke ụwa na-anwale nzukọ, iji hụ na ngwaahịa ngwaahịa ga-akwụsi ike ma zute ụkpụrụ mba ụwa. Chemicals Noelson nwere alaka ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ na Japan, Europe, USA na obodo ukwu ndị dị na China, na-enye ndị ahịa niile ọrụ zuru oke na ọrụ ntanetị.
Technology Innovation Technology bu isi ihe na-aga n’ihu nke Noelson Chemicals. Kemgbe ọtụtụ afọ, Noelson Chemicals nọgidere na-emepe usoro kachasị elu nke ngwaahịa ntụ ntụ, n'otu aka anyị na ndị isi ụlọ ọrụ ama ama n'ụwa niile gbanwere nke ọma, guzobere mmekọrịta mmekọrịta dị ogologo oge, usoro maka usoro ọhụụ ọhụụ si mba ọzọ, iwebata patent ụwa ọhụrụ; n'aka nke ọzọ, anyị guzobere ekwenye mmekọrịta chiri anya mba notability mahadum dị iche iche ọkachamara nnyocha oru, anụ ụlọ isi ntụ ntụ na ihe ọhụrụ ihe nnyocha center, mba isi chemical laabu. N'ime afọ ole na ole gara aga, anyị mepụtara usoro gburugburu ebe obibi kachasị mma, usoro antirust pigment, usoro ntinye pigmenti na ntụpọ ntụ ntụ na usoro ihe dị iche iche dị iche iche, mejupụtara akụkụ nke ahịa oghere, yana isi ihe dị na Noelson Chemicals na-anọgide na-anọdụ ala na ọnọdụ idu ndú na ụlọ ọrụ.
Advantage Ahịa uru, mgbe ụfọdụ dị ka otu ihe dị mkpa dị ka teknụzụ. Nye ọnụahịa kachasị asọmpi, ebumnuche na-adịgide adịgide nke Noelson Chemicals. Anyị arụmọrụ ọkọnọ yinye management system, nnukwu-ọnụ ọgụgụ nke mmepụta na ọkọnọ ike, guzobe nke ngwaahịa pụrụ iche iji nyere ndị ahịa maka na-eri Mbelata ma welie ngwaahịa asọmpi.